VAIA750 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်ကို တစ်နာရီတွင် ၇၅၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်နံပါတ် ၂၅၀၉၆၉ တရားဝင်လက်မှတ်ရရှိထားပါတယ်။
မော်ဒယ်- VAIA 750
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: VAIA750
750LPH VAIA750 Purified Water Filtration System is the most popular water filtration product available today.
750LPH VAIA750 ရေစစ်က အကျော်ကြားဆုံးဖြစ်ပြီး ယနေ့ပဲ ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။
With the ability to turn dirty water, water that does not meet the standards into pure water, drinking water is the most popular today because it has many benefits for human health, helping to protect the human body from related diseases. in relation to the use of unqualified water.
ညစ်ညမ်းတဲ့ ရေတွေကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းကြောင့် စံချိန်မမီတဲ့ ရေတွေကို ရေသန့်သို့ ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်။ ရေသန့်က ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးအမြတ်များစွာရှိခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်ကို အခြားရောဂါတွေ ဝင်ရောက်မှုမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် လူအများ သုံးစွဲလာကြပါတယ်။
As the quality of tap water, groundwater in urban and rural areas is increasingly polluted, the use of water filtration methods, purified water treatment to have water sources ensures hygienic standards to serve the needs. living and eating isavery necessary job.
ကျေးလက်မှာရော မြို့ပြမှာပါ ဘုံပိုင်ရေ၊ မြေအောက်ရေတွေက အလွန့်အလွန် ညစ်ညမ်းလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရေကို ပြုပြင် စစ်ထုတ်ပေးတဲ့ နည်းတွေ အသုံးပြုဖို့ အရမ်းကို လိုအပ်လာပါတယ်။ ဒါမှ စားသောက်နေထိုင်ရေးက ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်မှာ ဖြစ်တယ်။
Viet An General Trading Joint Stock Company is proud to bealeader in providing the best water filtration and treatment solutions today. In nearly 20 years of construction and development, Viet An has introduced to the market thousands of water purification lines, purified water treatment systems withafull range of capacities ranging from 150 liters/h, 300 liters/h, 400 liters/h, 750 liters/h ... to 70,000 liters/h to serve the needs of the people, the investor and the factories, enterprises producing and trading in bottled and bottled water.
Viet An အထွေထွေ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီသည် ယနေ့ခေတ်မှာ အကောင်းဆုံး ရေစစ်စနစ်တွေ ထုတ်လုပ်ပေးနေတဲ့ ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ် ၂၀ နီးပါး Viet An မှ စက်ရုံတွေ လုပ်ငန်းအသေးစားတွေ ရေဘူးတွေ ကူးသန်းရောင်းဝယ်သူတွေအတွက် တစ်နာရီမှာ ၁၅၀ လီတာ၊ ၃၀၀ လီတာ၊ ၄၀၀ လီတာ၊ ၇၅၀ လီတာ၊ ၇၀၀၀၀ လီတာ စသဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း မတူညီတဲ့ ရေစစ်ထုတ်ကိရိယာ ထောင်ပေါင်းများစွာကို ဈေးကွက်မှာ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
In this article, Viet An would like to introduce to youasuper pure water purifier withacapacity of 750 liters/h, VAIA750, this is an industrial water filtration system that is rated as the best and used by many people.
ဒီဆောင်းပါးမှာ Viet An မှ တစ်နာရီမှာ ၇၅၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ စူပါရေသန့်ပေးတဲ့စက် VAIA750 ကို မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီစက်ကတော့ လူအများရဲ့ ထောက်ခံမှု ရရှိထားတဲ့ ရေစစ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
What is 750LPH VAIA750 Purified Water Filtration System? Why should we use it?
750LPH VAIA750 ရေစစ်ထုတ်စနစ်ဆိုတာ ဘာလဲ?
ကျွန်တော်တို့က အဲ့ဒါကို ဘာကြောင့် အသုံးပြုသင့်တာလဲ?
750LPH VAIA750 Purified Water Filtration System isaspecialized system used to filter water, remove chemicals, remove iron, manganese, alum, dirt, algae, bacteria, viruses, biological contaminants from the source. water does not guarantee standards. The purpose is to bring usersasource of clean, pure water to meet the requirements of living, eating, drinking or production and business.
750LPH VAIA750 ရေစစ်က ရေအရင်းအမြစ်မှ ဓာတုပစ္စည်းတွေ၊ အိုင်းယွန်း၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ ကျောက်ချဉ်၊ အညစ်အကြေး၊ ဘက်တီးရီးယား၊ ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ ပိုးမွှားတွေကို စစ်ထုတ်ပေးဖို့ စပါယ်ရှယ် စနစ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အသုံးပြုသူတွေကို စားဝတ်နေရေး သို့မဟုတ် စီးပွါးရေးအတွက် အဆင်ပြေစေရန် သန့်ရှင်းသော ရေအရင်းအမြစ်ကို ပေးဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Water filtration line system with 750 liters/h uses stainless steel autovan filter column assembled at Viet An's factory according to the most modern technology of the United States. The production process is in accordance with ISO 9001-2015, the most rigorous and elite international standards today. Products have been tested by reputable centers in the world such as: WQA (Water Quality Association), NSF (Nation Sanitary Foundation) and meet FDA standards of the United States.
တစ်နာရီမှာ ၇၅၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ ရေစစ်က စတိန်းလက်စ်စတီး ရေစစ်ကော်လမ်ကို အသုံးပြုထားပြီး US ရဲ့ ခေတ်အမီဆုံးနည်းပညာအတိုင်း Viet An စက်ရုံမှာ တပ်ဆင်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်က ယနေ့ခေတ်ရဲ့ နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းဖြစ်တဲ့ ISO 9001:2015 နဲ့ ကိုက်ညီပါတယ်။ ပစ္စည်းတွေကို ကမ္ဘာ့နာမည်ကြီး စင်တာတွေဖြစ်တဲ့ WQA(ရေကွာလတီ အဖွဲ့) NSF(နိုင်ငံသန့်ရှင်းရေး ဖောင်ဒေးရှင်း) တို့မှ စစ်ဆေးထားပြီး US ရဲ့ FDA လက်မှတ်လည်း
In Vietnam, water purification products applying RO filtration technology have been tested by the General Department of Quality Measurement, Institute of Occupational Medicine and Sanitation, and the Department of Military Medicine has been tested to meet the standards and are certified by the Hanoi Department of Health. food hygiene and safety.
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာ RO စစ်ထုတ်နည်းပညာ အသုံးပြုထားတဲ့ ရေသန့်ပစ္စည်းတွေကို အထွေထွေ အရည်အသွေးတိုင်းတာ ဋ္ဌာန၊ ဆေးနှင့် အညစ်အကြေးဆိုင်ရာ နယ်ပယ် အဖွဲ့အစည်း၊ တပ်မတော် ဆေးဘက်ဋ္ဌာနတို့မှ အရည်အသွေးပြည့်မီမမီ စစ်ဆေးပြီး ဟနွိုင်း ကျန်းမာရေးဋ္ဌာနမှ လက်မှတ်ပေးပါတယ်။
Specifications of 750LPH VAIA750 Purified Water Filtration System
750LPH VAIA750 ရေစစ်ထုတ်ကိရိယာ၏ ဖော်ပြချက်များ
Product's name: 750LPH VAIA750 Purified Water Filtration System
Capacity: 750 liters/h
Power consumption: 1.64 Kw/h
ပစ္စည်းအမည်- 750LPH VAIA750 ရေသန့်စစ်ထုတ်စနစ်
လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း-တစ်နာရီတွင် ၇၅၀ လီတာ
အလေးချိန်- ၆၈ ကီလိုဂရမ်
ပါဝါစားခြင်း- တစ်နာရီတွင် ၁.၆၄ ကီလိုဝပ်
ပါဝါပေးပို့မှု- ၂၂၀ ဗို့ ၊ ၃၈၀ ဗို့
Purified Water Filtration process of 750LPH VAIA750 Purified Water Filtration System
750LPH VAIA 750 ရေစစ်ရဲ့ ရေစစ်ထုတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်
The source water to be treated will be pumped upstream by the upstream pump system to the pre-filter system, then through the heavy metal filter system, the detox filter, the odor color to the water softening system, to the safe water filtration system, With the help ofabooster pump, it will bring water after going through the above stages to the ro membrane filtration system, thereby creatingastandard pure water source. Then the purified water will be passed through the sterilization system with UV light and ozone machine to completely remove 100% bacteria, the bacteria filter system before being taken to the storage tank waiting for filling. Here are the details of the uses of each filtration stage:
စစ်ထုတ်မယ့် ရေအရင်းအမြစ်ကို ရေဆန်ရေစုပ်စက်စနစ်နဲ့ အကြိုရေစစ်စနစ်ဆီကို စုပ်တင်ပါမယ်။ အဲ့ဒီ့နောက် ကြီးမားတဲ့ သတ္တုတွေ စစ်ထုတ်ပေးသော စနစ်ကို ဖြတ်ပြီး အဆိပ်အတောက် အနံ့အသက် စစ်ထုတ်သောစနစ်၊ ထိုမှ ရေကိုပျော့စေသောစနစ်၊ အဲ့ဒီ့နောက် လုံခြုံသော ရေစစ်စနစ်တွေဆီ စုပ်တင်ပေးပါမယ်။ အားပြင်းရေစုပ်စနစ်ကြောင့် အပေါ်က စနစ်တွေကို ဖြတ်ပြီးသွားတဲ့ ရေကို RO ရေစစ်ကို ဖြတ်ပြီး စံချိန်မီတဲ့ ရေသန့်အရင်းအမြစ်ကို ဖန်တီးပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့နောက် သန့်စင်ပြီးသော ရေများကို လောင်းဖြည့်ဖို့ သိုလှောင်တိုင်ကီထဲ မထည့်ခင် ၁၀၀%သော ဘက်တီးရီးယားတွေကို ဖယ်ရှားဖို့ UV အလင်းရောင်နဲ့ အိုဇုန်းစက်တွေ ပါဝင်တဲ့ ပိုးသတ်စနစ်၊ ဘက်တီးရီးယား စစ်ထုတ်စနစ်တွေဆီ ဖြတ်ရပါမယ်။ အောက်တွင် စစ်ထုတ်စနစ် တစ်ခုချင်းစီရဲ့ အသုံးပြုပုံတွေကို ဖော်ပြထားပါတယ်။
Upstream pumping system: It creates pressure to bring water to flow through the pre-filter system, wash the filter material and reconstitute.
ရေဆန် ရေစုပ်ခြင်း စနစ်- ရေကို အကြိုရေစစ်၊ ဆေးကြောပေးတဲ့ ရေစစ်တွေဆီ စီးဆင်းဖို့ ဖိအားပြုလုပ်ပေးတယ်
Pre-filter system: Helping the operator know about the time to wash the filter, check the safety of the entire water filtration line.
အကြိုရေစစ်- အော်ပရေတာကို ရေစစ်ကို ဆေးရမယ့်အချိန်သိအောင် ကူညီပေးတယ်။ ရေစစ်လိုင်းရဲ့ လုံခြုံမှုကို စစ်ဆေးပေးတယ်။
Heavy metal filtration system: Using quartz and ferrite materials to treat dirt in water to remove dirt, rust, mud with the size of 1 Microm, protect and prolong the life of the next filter level.
ကြီးမားသော သတ္တုများ စစ်ထုတ်ပေးသော ရေစစ်-သလင်းကျောက်တွေကို သုံးပြီး ရေကို ပြုပြင်တယ်။ ၁ မိုက်ခရိုနဲ့ ရေထဲမှ အညစ်အကြေး၊ သံချေး၊ ရွှံ့ စတာတွေကို ဖယ်ရှားပေးပြီး နောက်တစ်ဆင့်မှ ရေစစ်သက်တမ်းကို ရှည်စေပါတယ်။
Detoxification system: Use activated carbon of the Netherlands to detoxify, remove color, deodorize and createasweet taste for water.
အဆိပ်အတောက်ဖယ်ရှားခြင်းစနစ်- နယ်သာလန်မှ ကာဗွန်ကို အဆိပ်အတောက်ပြေစေပြီး အရောင်ဖယ်ရှားပေးကာ ရေအရသာ ချိုစေဖို့ အသုံးပြုတယ်။
Soft water filtration system: mainly removes limestone and magnesium in water, converts the hard water source to soft water to create the best water quality for the ro filter, protect the membrane and increase the longevity of the membrane.
ရေပျော့ရေစစ်- ရေထဲမှ သလင်းကျောက်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်တေကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ရေမာမှ ရေပျော့သို့ ပြောင်းလဲပေးကာ စစ်ထုတ်ဖို့ ရေကွာလတီကို အကောင်းဆုံးဖြစ်စေပြီး အလွှာပါးကို ကြာရှည်ခံစေပါတယ်။
Safety filtration system: Used to protect the ro-filter from clogging in the event of filter material passing through the filter to the pipeline.
လုံခြုံမှု ရေစစ်- သတ္တုတွေကို ရေစစ်မှ ပိုက်လိုင်း ဖြတ်စေသောအခါ RO ရေစစ်ကို ပိတ်ဆို့ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
Booster pump system: Create the highest pressure to push through the ro filter.
အားပြင်းရေစုပ်စက်စနစ်- RO ရေစစ်ကို ဖြတ်ဖို့ အမြင့်ဆုံး ဖိအားကို ဖန်တီးပေးပါတယ်။
Ro membrane system: Create pure water that meets standards of bottling according to standards QCVN 6-1:2010/BYT. With extremely advanced technology of the United States, the water through the ro water filtration system has been tested by prestigious international organizations.
RO အလွှာပါးစနစ်- QCVN 6-1:2010/BYT စံချိန်နဲ့ ညီစေတဲ့ ရေသန့်ကို ဖန်တီးပေးပါတယ်။ US ရဲ့ အလွန်ခေတ်မီသော နည်းပညာနဲ့ RO ရေစစ်ကို ဖြတ်သွားတဲ့ ရေကို နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများမှ စမ်းသပ်ထားပါတယ်။
UV water disinfection system: To remove infection back to water sources.
UV ပိုးမွှားစစ်ထုတ်စနစ်- ရေအရင်းအမြစ်များမှ ပိုးမွှားတွေကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။
အိုဇုန်းစနစ်- ရေကို လောင်းမဖြည့်ခင် ပိုးမွှားသန့်စင်ပေးဖို့ သုံးပါတယ်။
Bacterial filtration system: To remove dead bacteria in the water
ဘက်တီးရီးယားရေစစ်- ရေထဲမှ သေနေသော ဘက်တီးရီးယားများကို စစ်ထုတ်ဖို့ သုံးပါတယ်။
If you want to own this high quality industrial purified water filtration system, please contact Viet An immediately at 0949 414141 forafree consultation.
သင်က အရည်အသွေးမြင့်တဲ့ ဒီရေစစ်ကို ပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်ဆိုရင် ၀၉-၄၉ ၄၁ ၄၁ ၄၁ ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Once you have decided to choose this VAIA750 Purified water filtration system, you can study to investasynthetic filling system made of stainless steel to fill 35-60 jars/h (20L jar) and 150 bottles/hour (500ml bottle) withacompetitive price from just ... USD.
10 Activated carbon ကာဗွန် 1 unit Holland
17 Membrane housing အလွှာပါးအိမ်2unit VA/ USApec
18 RO membrane RO အလွှာပါး2unit Hitech-USA/CSM Korea
Hỏi đáp & đánh giá 750LPH VAIA750 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်